Khabiir Cimilada ah wuxuu sheegaa Dhamaan Wixii Ku Saabsan Xeerarka Badbaadinta Iexaha
Shabakadaha internetka waxay u nugul yihiin weerarada fayraska by siyaabo badan. Isticmaalayaasha abuura bogagga shabakadaha WordPress khatarta soo weerarta sababtoo ah fursadda xaddidan ee la heli karo si loo ilaaliyo Sida laga soo xigtay nabadgelyada iThemes, in ka badan 30,000 oo ah goobo cusub ayaa la joojiyay maalin kasta. Tusaale ahaan, dadka isticmaala qaarkood waxay leeyihiin erey-celin daciif ah oo si sahal ah u saari kara keyloggers
Amniga shabakadda waa tixgelin lagama maarmaan ah ee mulkiilaha bogga - propolis vitamin c echinacea. Macaamiisha iyo akhristayaashu waxay sidoo kale ku dhici karaan dhismo website-ka ah, oo ganacsi ka dhigaya sumcad xumo. Ammaanka sugidda amniga ayaa ah maalgalin ka wanaagsan tan la mid ah ka dib markii la jabsaday amniga. Isticmaalayaasha talo bixinta amniga si ay u xoojiyaan aqoonsigooda user iyo sidoo kale bixinta qaar ka mid ah farsamooyinka shaqsiyeed ee faa'iido u leh user user plugality kuwaas oo u yimaadaan daabacaad bilaash ah ama premium.
Oliver King, oo ah khabiir hormood ah oo ka socda Semt , wuxuu halkan ku soo bandhigayaa tusmada guud ee tusaha iexaha ee khuseeya ammaanka
iThemes security waxay u muuqataa sida WordPress ugu wanaagsan WordPress. IThemes waxay leedahay wax ka badan 30 qaab oo kaa caawin kara ilaalinta website-kaaga qaar ka mid ah hanjabaadaha amniga guud. Qaybta muhiimka ah ee tani waa in iThemes ammaanka u gudbiyo macaamiishiisa helitaanka 4.7 rating ah 5 ka mid ah. Plugin wuxuu leeyahay in ka badan 4 million downloads ah. Si aad u sharaxdid sida iThemes security plugin u shaqeeyo, waxaan isticmaali karnaa qorshaha bilaashka ah oo aan ku galeyno dashboardka
Marka aad rakibto iThemes security plugin, waxaad heshaa dhawr fursadood oo amniga ah oo lagu isticmaalo boggaaga. Doorashada koowaad waxay badanaa ilaalineysaa boggaaga adigoo isticmaalaya farsamooyinka Ilaalinta Shabakada Shabakada Shabakada Shabakada si aad u hubiso shabakadaada. Badhanka popupka wuxuu soo bandhigaa doorashooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin:
Tani waa cuntad kaa caawisa inaad abuurto bog ka mid ah boggaga internetka xaalada hadda jirta. Kaalmada waxaa ka mid noqon kara bogga oo dhan, xogta iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee faylasha sida faylasha warbaahinta. Waxaad mar walba ku noqon kartaa nuqulkan waqti kasta mar haddii ay wax khalad ah ku dhacdo bogga xaqiijinta
U oggolow Diiwaannada Diiwaangelinta
Muujintani waxay nidaamisaa cusboonaysiinta wp-config.php iyo faylasha .htaccess.
Tilmaamahan wuxuu awood u leeyahay inuu ku dhejiyo goobaha internetka oo ka duwan kuwa ku jira iyo mawduucyada isku dhaca.
Naga caawi hagaajinta
Farsamadani waxay u oggolaaneysaa in lagu daro amniga si loo uruuriyo macluumaadka qarsoodiga ah ee ku saabsan waxyaabaha loo adeegsanayo si loo hagaajiyo qaababka farsamooyinka khidmooyinka ammaanka.
Waa inaad gujisaa mid kasta oo ka mid ah. Markaad dhameysid, waxay si toos ah kuu geyneysaa dashboardkaaga
Dashboardka: Dashboardka wuxuu leeyahay waxyaabo ilaalin badan oo kaa caawinaya inaad ku badbaado. Waxyaabaha ay ka mid yihiin Ha joojin naftaada, bilowga bilowga, Xaaladda amniga (taas oo lagu dari karo mudnaanta sare, mudnaanta dhexdhexaadka ah ama mudnaanta hoose).
Waxaa sidoo kale jira Goobaha, Qalabka Horumarinta, Dhameystirka iyo Muujinta Caawinta.
Ithemes Amniga Amniga waa qiyaas amniga oo shabakado badan oo u baahan in si wanaagsan loo koro. Waa lagama maarmaan in la xusuusto sameynta nuqul ka mid ah boggaaga ka hor intaadan isku dayin qaar ka mid ah sifooyinkaas. Tani waa sababta oo ah iThemes security plugin waxay kicin kartaa saameynta xun ee goobta sida qaabka website uu uga jawaabo xaaladaha kala duwan. Xakameynta amniga waxay nadaamisaa qaar ka mid ah filimka spam ee ugu sareeya iyo sidoo kale sifooyinka IP-blocking features. Natiijada, iThemes security plugin waxay noqon kartaa tixgelin muhiim ah ee boggaaga WordPress.